Ukulungiswa kwemvelo ku-bungalow enhle enamagumbi okulala amabili - I-Airbnb
Ukulungiswa kwemvelo ku-bungalow enhle enamagumbi okulala amabili
Masatepe, Departamento de Masaya, i-Nicaragua
U-Neeltje unokuphawula okungu-33 kwezinye izindawo.
Le ndlu ene-WIFI ezinzile itholakala endaweni encane ye-bungalow park Villas Vista Masaya enombono omuhle we-crater lake iMasaya.
I-bungalow yabantu abane itholakala ehlathini elihle elishisayo . Indlu ifanele ukuhlala isikhathi eside. Kukhona ichibi kanye nezindlela zokuhamba. Indlu ilungele ukusebenza nge-inthanethi ngamakamelo okulala amabili.
Kuthule futhi isimo sezulu simnandi.
Ibanga eliya emgwaqeni wetiyela liyi-1.5 km futhi kuqala idolobha eliphakathi nendawo laseMasatepe nazo zonke izinsiza.
I-bungalow inamakamelo okulala amabili ahlukene anemibhede yomuntu ngamunye, igumbi lokugezela elilodwa elineshawa eshisayo kanye nendlu yangasese ehlukile.
Ilineni lihlinzekwa futhi imibhede iyenziwa uma ufika. Uzothola ithawula elengeziwe kumuntu ngamunye we-swimming pool.
Uma uthola kudingekile, ungashintsha ilineni elisetshenzisiwe nathi ngamashidi ahlanzekile namathawula.
Amafasitela anamanethi omiyane namasango, ngakho ungakwazi ukuvula amafasitela futhi uvumele umoya omusha ungene ekamelweni lakho.
Kukhona ikhishi lamapulangwe elihlome ngokuphelele elinesiqandisi kanye nesitofu segesi esingabasa ezine esinohhavini.
Ngaphezulu kobubanzi obugcwele be-bungalow kunethala elimboziwe lapho ungalenga khona i-hammock ekhona, kodwa lapho kukhona khona indawo yezihlalo ezine ezinyakazayo, izihlalo zegumbi lokudlela kanye netafula lokudlela. Ukuze kube lula kuwe, kunamatafula amabili, ngakho-ke elilodwa lingahlala ngaphandle.
Baningi osomabhizinisi bendawo ababambe iqhaza ekwakhiweni nasekufakweni kwefenisha, kanti-ke thina silinakile izinga.
Indlu itholakala phakathi nemvelo. Isiginali ye-WIFI yinhle, ngaphandle kwalokhu okubandakanya izindleko ezengeziwe, kodwa isipiliyoni sibonisa ukuthi phakathi kwehora lesikhombisa nelesishiyagalolunye ebusuku isignali iba buthaka noma ima ngoba isignali igcwele kakhulu. Sikucela ngomusa ukuthi ukucabangele lokhu.
IVillas vista Masaya iqhele ngamakhilomitha ayi-1.5. enyakatho yedolobha elikhulu kunawo wonke laseMasatepe lasePueblos Blancos elaziwa ngobungcweti balo kanye nemibono emihle nezilwane zasendle. Ifenisha eningi yenziwa eMasatepe. Idolobhana liseyiqiniso. Kukhona imakethe yansuku zonke yezithelo nemifino yakho.
Abantu babehlala endaweni enamagquma yaseNimboja esikhathini eside ngaphambi kokuba abaseSpain bathole iLatin America. Igama lisho 'umgwaqo oya emanzini' futhi esikhundleni sokuhamba uye edolobheni, uma ujikela kwesokudla uqhubeke wehla ngomgwaqo, ekugcineni uzofika eLake Masaya.
Wonke umuntu endlini encane uyazana futhi abantu bayabingelelana futhi baxoxe ngezindaba zakamuva. Ukuze uthenge amaqanda, amasemishi endawo noma iziphuzo ezithambile ungakwazi kakade ukuya esitolo esincane sendawo. Abahlali bomakhelwane bazama ukubhekana nakho konke ndawonye. Isibonelo, ipayipi elisha lamanzi selifakiwe futhi ingxenye yokuqala yomgwaqo ongenela manje isigandayiwe. Abantu basebenza kakhulu ezimbonini ezihweba mahhala, kuhulumeni noma njengabamashi, abashiseli kanye nabasebenza ngogesi. Ukutshalwa kwezitshalo zokudla okuyisisekelo kanye nezithelo kusetshenziselwa ukusetshenziswa komuntu siqu.
Igama lami nginguNel futhi ngivela eNetherlands. Ngiyajabula ukukusiza nethimba lami. Mina ngokwami ngihlale kule ndawo iminyaka engaphezu kweshumi futhi eNicaragua iminyaka engaphezu kwamashumi amabili. Ngizizwa ngisekhaya endaweni lapho nginabantu abanobungane. Kuthule lapha futhi kuyindawo enhle yokulondoloza imvelo. sizokuthanda
ngiyajabula ukukusiza uma unemibuzo futhi ubheke amathuba okufeza izifiso zakho.
Igama lami nginguNel futhi ngivela eNetherlands. Ngiyajabula ukukusiza nethimba lami. Mina ngokwami ngihlale kule ndawo iminyaka engaphezu kweshumi futhi eNicaragua iminyaka engaph…